कुन रोगीले कस्तो जुस पिउँदा उपयुक्त हुन्छ ?
बागमतीको मुख्‍यमन्त्रीमा राजेन्द्र पाण्डेलाई प्रस्ताव
डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका १० जना कार्यकर्ता पक्राउ
बाग्मती प्रदेशको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिने
भक्तपुरमा १६ सहित काठमाडौँ उपत्यकामा थपिए २ सय १४ जना संक्रमित
पछिल्लो २४ घन्टामा थप ५ सय ४५ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि
रेफ्रिजेरेटर खरिद गर्दा ख्याल गर्नैपर्ने ४ कुराहरू
तीन दिनदेखि अवरुद्ध मेची राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालनमा
नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक सुरु
You are at:Home»स्वास्थ्य»कुन रोगीले कस्तो जुस पिउँदा उपयुक्त हुन्छ ?
By bktnews Posted on	 October 12, 2021 स्वास्थ्य
काठमाडौं । मान्छेले रोग अनुसारको ओखती र खानेकुरा खानु जरूरी हुन्छ । यसैगरी कुनै पनि रोग वा स्वास्थ्य समस्यामा विचार गरेर जुस पिउनु उपयुक्त हुन्छ । कुन रोग लाग्दा कुन जुस पिउने आज हामी तपाईंलाई बताउँछौं ।
भोक नलाग्दा भोक नलाग्ने मान्छेले बिहान खाली पेट कागतीपानी खानुपर्छ अनि खानुअघि अदुवाको पेस्टमा बीरेनुन हालेर खानुपर्छ । रगत सफा गर्न शरीरमा विद्यमान रगतलाई शुद्ध बनाउनका लागि कागती, गाजर, काउली, पालुंगो, स्याउ, तुलसी र बेलका पातहरूको रस लाभदायक हुन्छ ।
दमको समस्या दमको रोगीले लसुन, अदुवा, तुलसी, काउली, गाजरको सुप र मुँगको दाल अनि बाख्रीको दूध खाँदा फाइदा पुग्छ ।उच्च रक्तचाप उच्च रक्तचापका रोगीहरूले गाजर, अंगुर र मौसमको जुस पिउनुपर्छ । अनि शारीरिक र मानसिक आराम पनि गर्नुपर्छ ।
निम्न रक्तचाप लो ब्लडप्रेसर भएकाहरूले गुलिया फलको रस पिउनुपर्छ भने अमिलो फलको रस पिउनुहुँदैन । अंगुर र मौसमको रस लाभदायक हुन्छ । जन्डिस जन्डिस हुँदा रोगीले अंगुर, स्याउ र मौसमको रस पिउनुपर्छ । किसमिस डुबाएको पानीले पनि राम्रो गर्छ ।
अनुहारको दाग अनुहारको दाग हटाउनका लागि गाजर, खरबुजा, प्याज, तुलसी र पालुंगोको रस लाभदायी हुन्छ । क्यान्सर क्यान्सरबाट मुक्तिका लागि गाजर र अंगुरको रस पिउनु राम्रो हुन्छ ।
प्रकाशित मितिः २०७८ असोज २६ मंगलबार
के हो हेमोफिलिया ? महिलाको तुलनामा पुरुषलाई किन बढी लाग्छ यो रोग ?